Mootummaan USA yoomi illee Oromoo gargaaree hin beeku.
Qabsoo Ummani Oromoo waggaa 45 darbee gegeesaa jiru, Ajjeechaa, Hidha, biyya ari’amuu, lafa irra buqa’uu fi dararama adda adda Oromoo irrati goodhamuu Amerikan siirti ni beekti. Qabsoo Oromoo gegesuu kana warii wagaa 40 darban kasee hanga amati kana oganan jira Leencoo Lata, Abiyuu Galata, Ibsa Gutama, Dr. Tadase Eba, Dr. Beyan Asoba Prof. Asefa Jalata Prof. Mohamad Hasan faa USA kan jiratanfi Mootumman Amerika siirti isaan beekuu namoota kana keessa tokko wamee congresaa irrati Dubsuu dhisuun isaa ama ilee sagalee Oromoo dhaga’uu kan hin feenee fi akka bara 1991 sun nu ukamsuf akka muratee beekuu qabna. Uni ilee fala birra barbaduu qabna.
Oromoo kan ta’ee hundi USA, UK, France immamaati isaani siirna Habasha tumsani Oromoo garbonfachisun ala Oromoof fayida tokko fidan hin beekan. USA amoo Immamatii ishee dhaaba ciimee gargaaruu dha. Kanaafuu oromoon tokkuummaan dhaabatee of danda’uun akka ormii nu duba hiriruu goochuu qabna.malee wal tufanee Habasha jala shubsuu qabsoo oromootiif furmaata hin ta’u. Dhalooti Haraan Oromoo amoo nama Habasha jala sdhubsuu yoom illee hin fudhatuu kana immoo seenaan dhugaa ba’a. Nama Habasha jala hiriree waliin hariroo kami ilee hin feedhu. Kaanafuu tokko tanee humna cimma waliin qabaanee abba feedhe waliin mariachuu qabna malee dhaabba bibixilee ishe fudhanee Habasha jala adeemuu hin qabnuu.
Warri Habasha jala adeemtan akkuma OPDO uumataa keessan irrati diina gobsuuf waan deemtanfi dogogora OPDOn hojeete dalagauu hin qabdan. Habasha jalaa ba’aa Oromoo ta’aa. Kara birra amoo Habasha (Amhari) TPLF bakka bu’uuf deemuu warra Mirga Hirreen murteefana Oromoo hin fudhanee, waraa Feedralism Hin fudhanee, Wara Afaan Oromoo Afaan hojii biyyoleessa ta’uu hin fudhanee, wara Mootummaa nannno Oromiyya jirachuu hin fudhanee, wara WBO jirachuu hin amanee, wara tokkummaa hin amanee, wara Oromiyya fi Oromoo jibani dha. raggadha” http://www.youtube.com/watch?v=XNYvk4YmqII “ dhageefadha.
Oromoon amoo Amhara Gamachisuuf waan isaan jeedhan kessa:-
“Keyati 39 kan Oromoo utuu hin tanee kan Tigreeti Obbo Bulcha Damakisa
” Hidhamtoota seenaa ta’uu hin qabnu Ethiopiama fudhachuu qabna ODF gara EDF jijiruu qabna Leencoo Bati “
“Foxoqistoon du’aa Melese booda biyya akka hin foxosineef irrati hojeechuu qabna.” Jawar Mohama
“Brihanu Nega Mirga Oromoo yoo ni degeruu ta’ee gaafii Bilisummaa ni dhifna” Jamal Galchu,
“Qabsoon Bilisummaa Oromoo wagga 40 gegefamee siiri miti” J/Kama Galchuu
“QBO gaafa egalee kaafne ilaalcha Ethiopiama qabna” Dimma Negaow
“Shaneen ABO Awalamuun Uumataa Ethiopia qabsoof akka wal dukka hiriruu goodha” dr. Nuru Dadafo
Kan kanafakatan heedutuu jira gutmaa isaa fula duran Oromoof dhiyeesina.
TPLF afaanin ilee ta'uu Mirga hirreen murteefana, Afaan Oromoon hojeechuu, Mootummaa Naanno Oromiyaa jirachuu kkf hunda ni fudhata. Namoon Oromoo Medrka fi Ginbot7 heerumuuf folatan kun Ogana OPDO Kuma Damekessa, Junedin Sado, Abba Dula Gamada fi Alemayo Atomsa irra mal foyau’msi isaan?. Warii Kalessa Oromoon akka Tigren garbonfatuuf lolan TPLF angoo keenaf akka J/Kamal Galchuu faa amoo Ginbot7 lolan Oromoo Amharaf Garboofachisuu demuu kanafii hinmilka’aan.